Maxay Soomaalida Kenya uga biya-diideen natiijadii tirakoobka - BBC News Somali
Maxay Soomaalida Kenya uga biya-diideen natiijadii tirakoobka
Image caption Qoys la tirokoobayo
Mid ka mid ah deegaanadasi waa gobolka ay Soomaalida degto ee Waqooyi Bari ,waxay natiijadu muujinaysaa in tirada shacabka ay hoos u dhacday taasi oo sababtay inay su'aal ka keenaan hogaamiyayaasha deegaanadaas oo doonaya in dhaqaalihii la siin jiray uu sidii hore sii ahaado.
Tirada ayaa sidoo kale muujinaysa isu dheeli tirnaan la'aan dhanka jinsiyada ah taasi oo ah in raggu ay ka badan yihiin haweenka.
"Macluumaadkan la soo saaray toddobadkan waa been abuur mana aha mid ku qotama u jeedooyiin," ayuu yiri Adan Bare Ducaale, oo ah hogaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka Kenya.
Image caption Haweenay samaynaysa tirakoobka
Dalka Kenya kheyraadka laguma qeybsado tirada ku nool gobolada oo kali ah balse sidoo kale waxay tirada go'aan ka gaartaa xadeynta deegaanada iyo sameynta deegaan baarlamaaneed cusub.
Image caption Dalka Lubnaan muddo dhan toboneeyo sano lama qaban tirokoobka qaranka.
Dalka Nigeria ayaa isna leh taariikh dheer oo ah muran dhanka tirakoobka waxaana lagu waday in tirakoobka la qabto 2016, balse dhaqaalo la'aan iyo sababo dhanka tasiilaadka ah ayaa dib loogu dhigay.